Ye-Mon's Personal Pages: 2009
... "HaveaMerry X-mas" ...
3 comments Labels: rockville, x-mas
1 comments Labels: health insurance, public health
ကျန်းမာရေးအာမခံ ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းလင်းထားမှ ကျန်းမာရေးအာမခံ ပုံစံကွဲ အမျိုးမျိုး ကို ပြောတဲ့အခါကျရင် အဆင်ပြေပါမယ်။ ၀ီကီမှာ ရေးသားထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို အဓိကထား ဘာသာပြန်ပြီး ဘာ့ကြောင့် ဒီလို သတ်မှတ်ချက်တွေ ထားရတာလဲ၊ ဘယ်လို သတိထားစရာတွေရှိလဲ ဆိုတာကို စာရေးသူရဲ့ လေ့လာမှုနဲ့ အတွေ့အကြုံများအရ ဖြည့်စွက် ပြောသွားပါမယ်။ အသုံးအနှုန်းအများစုဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံ စနစ်နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေဖြစ်လို့ အခြားသော နိုင်ငံများက ကျန်းမာရေးအာမခံ အသုံးအနှုန်းများနဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်တာကို သတိချပ်ပါ။
အာမခံသူ။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ကုမ္ပဏီ။
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသူ။ ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း အစရှိသည်။
ကျန်းမာရေးအာမခံ စာချုပ်။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ထားသူ နှင့် အာမခံ ကုမ္ပဏီအကြား ထားရှိသော ပဋိညာဉ်။ မည်သူက မည်သည့် တာဝန်ရှိသည် မည်သည့်ကိစ္စအတွက် မည်မျှ ငွေအကုန်အကျခံမည် စသည်ဖြင့် အသေးစိတ် ရေးသားထားသော စာချုပ်ဖြစ်သည်။
နောင်တွင် အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်လာပါက ဤစာချုပ်က သက်သေ အထောက်အထား ဖြစ်ပေမည်။
အာမခံကြေး။ အာမခံ ထားသူက အာမခံကုမ္ပဏီကို လစဉ် ပေးသွင်းရငွေ။
ဤအာမခံကြေးများကို စုပေါင်းပြီး နေမကောင်းသူများကို ဆေးကုသစရိတ် ပြန်လည်ထုတ်ပေးသည်။ အာမခံကြေး ကောက်ခံခြင်း၊ ဆေးကုသစရိတ် စိစစ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း တို့အတွက် အာမခံကုမ္ပဏီက ၀န်ဆောင်ခ ရလေသည်။ အာမခံကုမ္ပဏီက အစိုးရ သို့မဟုတ် အန်ဂျီအို ဖြစ်ပါက ရရှိလာသော ၀န်ဆောင်ခများသည် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ရန်နှင့် တိုးချဲ့ရန်အတွက် အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလိက အာမခံကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာဝင်များကို အမြတ်ငွေ ခွဲဝေပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးအာမခံ ထားသူက ကနဦး စိုက်ထုတ်ရမည့် ငွေပမာဏ။ နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်လာပါက ဆေးကုသစရိတ် ရှိလာပါမယ်။ ဒီစရိတ်တွေကို အာမခံကုမ္ပဏီက ငွေချက်ချင်း ထုတ်မပေးသေးပါ။ အာမခံကုမ္ပဏီနဲ့ အာမခံထားသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် စာချုပ်ထဲမှာ သဘောတူညီထားတဲ့ ငွေပမာဏ အထိကို အာမခံ ထားသူကပေးရပါမည်။ ဥပမာ - deductible က ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်ပြီး ဆေးကုသစရိတ် ကုန်ကျငွေက ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ဆိုပါက အာမခံထားသူ က ၅၀၀ ပေးရပြီး အာမခံကုမ္ပဏီက ၁၀၀၀ ပေးပါမည်။ Deductible ကို အချိန်ကာလ တစ်နှစ်အတွင်း ပမာဏ မည်မျှဟု သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ထိုအချိန် တစ်နှစ်ကျော်သွားပါက deductible ပမာဏမှာ တစ်က ပြန်စပါမည်။
ကျန်းမာရေးအာမခံ ထားသူ တစ်ဦးအနေဖြင့် အမှန်တကယ် လိုအပ်မှသာ ဆေးရုံဆေးခန်းသို့ သွားစေရန်အတွက် သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့ မသတ်မှတ်ထားပါက အာမခံကုမ္ပဏီက ငွေပြန်ပေးမှာပဲ ဆိုပြီး အနည်းငယ် နေထိုင်မကောင်းဟု ထင်သည်နှင့် ထစ်ခနဲဆို ဆေးရုံဆေးခန်း သွားပြတာမျိုး ပြုလုပ်လာနိုင်သည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်သူ အရေအတွက် များလာလျှင် အာမခံကုမ္ပဏီက ဆေးကုသစရိတ် စိုက်ထုတ်ရငွေ ပမာဏ များလာပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အာမခံထားသူများ၏ လစဉ်ပေးသွင်းနေရသော အာမခံကြေး မြင့်တက်လာမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပါက ကျန်းမာရေးအာမခံ ရှိနေသော်ညား deductible ငွေပမာဏကို မပေးနိုင်သည့် အတွက် ဆေးသွားမကုခြင်း၊ ဆေးရုံဆေးခန်း အရောက် နောက်ကျခြင်းများ ဖြစ်နိုင်။
စရိတ်မျှပေး။ စမ်းသပ်ခ နဲ့ ဆေးဖိုး ကုန်ကျစရိတ်တွေ အတွက် အာမခံထားသူက ဘယ်လောက် အာမခံ ကုမ္ပဏီက ဘယ်လောက် ပေးရမယ် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ (၁) - စမ်းသပ်ခအတွက် co-payment က ဒေါ်လာ ၄၀ နှင့် ဆရာဝန်က စမ်းသပ်ခ ဒေါ်လာ ၁၂၀ တောင်းသည် ဆိုပါက အာမခံထားသူက ဒေါ်လာ ၄၀ ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အာမခံ ကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ ၈၀ ပေးမည်။ ဥပမာ (၂) - ဆေးဖိုးအတွက် co-payment က ၁၀ ဒေါ်လာ ဖြစ်ပြီး ဆေးဖိုးစုစုပေါင်းက ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကျသည်ဆိုပါက အာမခံထားသူက ၁၀ ဒေါ်လာ ပေးရပြီး အာမခံကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ ၁၉၀ ပေးမည်။
Deductible နှင့် ရည်ရွယ်ချက်တူသည်။
စရိတ်မျှပေး မူကွဲ။ ဒီနည်းမှာတော့ အာမခံထားသူနဲ့ အာမခံကုမ္ပဏီတို့ အသီးသီး ပေးရမယ့် ငွေပမာဏကို ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဥပမာ - coinsurance ရာခိုင်နှုန်းက ၂၀/၈၀ ဆိုလျှင် ဆေးကုသစရိတ် ကုန်ကျငွေ၏ ၂၀% ကို အာမခံထားသူက ပေးရပြီး ၈၀% ကို အာမခံကုမ္ပဏီက ပေးမည်။
ချွင်းချက်များ။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ဆိုသော်လည်း ရှိရှိသမျှ ၉၆ ပါး ရောဂါ အားလုံး အကျုံးဝင်ချင်မှ အကျုံးဝင်မည်။ မည်သည့်ရောဂါများ သို့မဟုတ် ကုသမှုများ အကျုံးမ၀င်ပါ ဆိုသည်ကို အာမခံစာချုပ်တွင် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် plastic surgery (မျက်နှာ ခွဲစိတ် အလှပြင်ခြင်း) ကို exclusion ထဲ ထည့်ထားပါက ၄င်းကုသမှုအတွက် အာမခံထားသူက ၁၀၀% ပေးရပေမည်။ အာမခံကုမ္ပဏီက လုံးဝ ပေးမည် မဟုတ်။
စရိတ်ထိန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော ကုသမှုများအပ အခြားသော ကုသမှုများကို ဖယ်ထုတ်ထားခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးစရိတ် နှင့် အာမခံကြေးတို့ကို ထိန်းထားနိုင်သည်။
အာမခံကုမ္ပဏီက အများဆုံး ငွေမည်မျှအထိ ပေးမည်ဟု သတ်မှတ်ထားချက်။ ဥပမာ - coverage limit က ဒေါ်လာ ၁ သိန်းခွဲ ဖြစ်ပြီး ဆေးကုသစရိတ်က ဒေါ်လာ ၂ သိန်း ကုန်ကျနေပါက အာမခံ ကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ ၁ သိန်းခွဲ ပေးပြီး ကျန်ငွေ ဒေါ်လာ ၅ သောင်းကို အာမခံထားသူက ပေးရမည်။
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု သို့မဟုတ် အစိုးရ တစ်ရပ် အနေဖြင့် လူနာတစ်ဦးအတွက် “ငွေမည်မျှကုန်ကုန်” ဟု မိုးမဆုံး မြေမဆုံး အတိုင်းအဆမရှိ အကုန်အကျမခံနိုင်။ ထို့ကြောင့် လက်တွေ့ကျသော အများဆုံး ပေးမည့် ငွေပမာဏကို သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အာမခံထားသူက အများဆုံး ငွေမည်မျှအထိ ပေးရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားချက်။ (coverage limit နှင့် တူသည်။ သို့ရာတွင် out-of-pocket maximum က အာမခံထားသူ အတွက် သတ်မှတ်ချက် ဖြစ်သည်။) ဥပမာ - out-of-pocket maximum က ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ဆေးကုသစရိတ် စုစုပေါင်းက ဒေါ်လာ ၉ ထောင် ဆိုပါက အာမခံထားသူက ဒေါ်လာ ၂ ထောင် အထိ ပေးရပြီး ကျန်စရိတ် ဒေါ်လာ ၇ ထောင်ကို အာမခံကုမ္ပဏီက ပေးမည်။
ကျန်းမာရေး ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့် လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဘ၀ပျက်သွားသည်မျိုး ဒေ၀ါလီ ခံလိုက်ရတာမျိုး မဖြစ်အောင် အကာအကွယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသူ (နက်ဝပ် ဆရာဝန်)။ အချို့ ကျန်းမာရေးအာမခံများတွင် အာမခံကုမ္ပဏီနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် နက်ဝပ်ဆရာဝန် နှင့်သာ ပြသခွင့်ရှိသည်။ အခြား ဆရာဝန် နှင့် ပြသပါက မိမိဖာသာ အစအဆုံး အကုန်အကျခံရသည်။ အချို့အာမခံကမူ နက်ဝပ်ထဲက မဟုတ်သော ဆရာဝန်နှင့် ပြလျှင် လူနာက စိုက်ပေးရသည့် ငွေပမာဏ ပိုများသည်။ ဤသည်ကို coinsurance နှင့် ချိတ်ဆက်ထားတတ်သည်။ ဥပမာ - နက်ဝပ်ဆရာဝန် နှင့် ပြလျှင် coinsurance က ၂၀/၈၀ ဖြစ်ပြီး နက်ဝပ်ထဲက မဟုတ်သော ဆရာဝန်နှင့် ပြလျှင် coinsurance က ၅၀/၅၀ ဖြစ်မည်။
အာမခံကုမ္ပဏီက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ (ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း) ကို လူနာတစ်ယောက်လျှင် ငွေမည်မျှ ပေးမည်ဟု သတ်မှတ်ထားချက်။
ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်။ အချို့သော ဈေးကြီးသည့် ကုသမှုများ (ဥပမာ - magnetic resonance imaging သံလိုက်ဓာတ်မှန်) မပြုလုပ်မီ အာမခံကုမ္ပဏီကို ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် တောင်းရန် လိုအပ်သည်။ သို့မှသာ အဆိုပါ ကုသမှုအတွက် အာမခံကုမ္ပဏီက ငွေပေးချေလိမ့်မည်။ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မတောင်းပါက သို့မဟုတ် အာမခံကုမ္ပဏီက ခွင့်မပြုဟုပြောပါက အဆိုပါ ကုသမှုအတွက် စရိတ်ကို အာမခံထားသူက အိတ်စိုက်ပေးရပေမည်။
Risk ကို Juan က “ရောဂါရနိုင်ချေ” ဟု ဘာသာပြန်သည်။ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ကျား၊မ၊ အသက်အရွယ်၊ အနေအထိုင်ပေါ်မူတည်၍ ရောဂါရနိုင်ချေ မတူပေ။ အချို့က ရောဂါရနိုင်ချေ များပြီး အချို့က နည်းသည်။
ကျန်းမာရေးအာမခံ၏ အနှစ်သာရပင်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ရောဂါရနိုင်ချေ မတူညီကြသော်လည်း လူအားလုံး စုပေါင်း၍ ငွေကြေး သာတူညီမျှ ထည့်ဝင်ခြင်းဖြင့် နေမကောင်းသူများ ဆေးကုသစရိတ် မထောင်းစေရန် အကာအကွယ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် ရောဂါရနိုင်ချေ တန်းညှိပေးလိုက်ခြင်းပင်။
ကျန်းမာရေး အာမခံစနစ် မရှိသော နေရာများတွင် လူနာက ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းကို ကုန်ကျစရိတ် တိုက်ရိုက် ပေးချေရသော်လည်း ကျန်းမာရေးအာမခံ စနစ်တွင် သာမာန်အားဖြင့် အာမခံကုမ္ပဏီက ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းကို ကုန်ကျငွေ တိုက်ရိုက် ပေးချေလေသည်။ ထိုကဲ့သို့ အာမခံကုမ္ပဏီက လူနာကို ကျော်ပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးသူကို တိုက်ရိုက် ငွေပေးချေခြင်းကို တတိယလူက ငွေပေးချေခြင်း (Third party payer system) ဟု ခေါ်ဆိုသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် ငွေမပေးချေရခြင်းကြောင့်၎င်း အာမခံကြေး ပေးသွင်းထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် မိမိ၏ ရပိုင်ခွင့်ဟု ယူဆသောကြောင့်၎င်း အာမခံထားသူက ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း များကို မကြာခဏ သွားရောက်ပြီး ကုသခံခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ မိမိဖာသာ ငွေပေးချေရမည်ဆိုလျှင် ထိုကဲ့သို့ အကြိမ်ရေ များများ သွားရောက် အကုသခံချင်မှ ခံပေမည်။ ဤကဲ့သို့ ပုံမှန်အနေအထားထက် ပို၍ ဆေးကုသခံယူခြင်းကို moral hazard ဟု ခေါ်သည်။
ကျန်းမာရေး အာမခံထားသူ အတော်များများက Moral hazard ကို ကျင့်သုံးနေလျှင် ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ် တက်လာပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အာမခံကြေး တက်လာနိုင်သည်။
လူတစ်ဦးသည် မိမိ၏ ကျန်းမာရေး ဆိုးလာစရာ ရှိသည်ဟု သံသယ ရှိသော အခါမှ ကျန်းမာရေးအာမခံ ၀ယ်ခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုသည်။ ဥပမာ - ဆေးလိပ်သောက်သူသည် မသောက်သူထက် ကျန်းမာရေး ပိုပြီး ဆိုးနိုင်သည်။ အာမခံကုမ္ပဏီက ဆေးလိပ်သောက်သောက် မသောက်သောက် အာမခံကြေးကို အတူတူ တောင်းလျှင် ဆေးလိပ်သောက်သူများက မသောက်သူများထက် ကျန်းမာရေးအာမခံ ပိုပြီး ၀ယ်လာကြစရာရှိသည်။ တဖန် ထိုဆေးလိပ်သောက်သူများကပင် ပိုပြီး နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်ကြသဖြင့် အာမခံကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အာမခံကြေးရသည်နှင့် မကာမိအောင် ဆေးကုသစရိတ် ပြန်ထုတ်ပေးရဖွယ်ရှိသည်။
ကျန်းမာရေးအာမခံ - မိတ်ဆက် မှာတုန်းက “လူတိုင်း” ဆိုသည့် စကားလုံးကို စာလုံးနက် (Bold type) ဖြင့် ပြထားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျန်းမာရေးအာမခံသည် လူတိုင်း ၀ယ်မှသာ ကောင်းမွန်သော စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေမည်။ နေမကောင်းသူများကသာ ကျန်းမာရေးအာမခံ ၀ယ်ပြီး ကျန်းမာရေး ဒေါင်ဒေါင်မည်နေသူများက မ၀ယ်လျှင် ကျန်းမာရေးအာမခံ ဈေးကွက် ပျက်သွားနိုင်သည်။ Death spiral တွင် အသေးစိတ် ဆက်ဖတ်ပါ။
ကျန်းမာရေးအာမခံ ကုမ္ပဏီ၏ နေ၀င်ချိန်။ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်သူ သို့မဟုတ် နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်လာစရာရှိသည်ဟု မိမိကိုယ်မိမိ သိနေသူများကသာ ကျန်းမာရေးအာမခံ ၀ယ်လျှင် အာမခံကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် တွက်ချေမကိုက်တော့။ အာမခံကြေး ပိုတောင်းတော့မည်။ အာမခံကြေး ဈေးတက်လာသောကြောင့် ရောဂါကြီးကြီးမားမား ရှိသူများလောက်သာ အာမခံဝယ်တော့မည်။ ထိုအခါ အာမခံကုမ္ပဏီက ဆေးကုသစရိတ် ပိုပြီးများများ ထုတ်ပေးရဦးမည်။ အာမခံကြေး ထပ်တက်လာမည်။ ထိုသို့ သံသရာလည်ပြီး အာမခံကုမ္ပဏီ ပြုတ်သွားပေမည်။
ကျန်းမာရေးအာမခံ ပုံစံကွဲအမျိုးမျိုးကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါဦးမည်။
စာရှုသူများသို့ ပန်ကြားချက်။ ။ ပိုမိုသင့်လျော်သော ဘာသာပြန် စကားလုံးများ အကြံပေးလိုပါက မှတ်ချက်တွင် ရေးသားသွားစေလိုပါသည်။
၀န်ခံချက်။ ။ စာရေးသူသည် ကျန်းမာရေးအာမခံ ကုမ္ပဏီ မပိုင်ပါ။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာလည်း ၀ယ်မထားပါ။
5 comments Labels: health insurance, public health
၅၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉
1 comments Labels: introduction, public health
ဒီဘလောက် မနေ့က သုံးနှစ်ပြည့်သည်။ ဘလောက်ရေးရတာကို ကြိုက်ပါသည်။ သို့ပေမယ့် ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ စာရေးနှုန်းက သိသိသာသာ နှေးကွေးလို့လာနေသည်။ ပုံမှန်ဆက်ရေးဖြစ်ဖို့ အတော်ကြိုးစားရဦးမည်။
3 comments Labels: anniversary, autobio, burmese
၂၃၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉
7 comments Labels: law, OpEd, public health
4 comments Labels: breast cancer, burmese, OpEd, public health
၁၀၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉
အီးမေးလ်များက ပြောသော သမိုင်း
စာရေးသူရဲ့ အီးမေးလ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ကြည့်တော့ ဒီလို သမိုင်းကြောင်းလေး တစ်ခုထွက်လာတယ်။
နေရာက ရန်ကုန်မြို့ရှိ အန်ဂျီအို ရုံးခန်းတစ်ခု။
"တိန်တောင် ... တိန်တောင် ... တိန်တိန်တိန် ... တွိတွိ ..."
ဘော့စ် အခန်း အလုပ်စားပွဲက တယ်လီဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကြားမှာ ဆက်ထားတဲ့ ဟာလေးဆီက မြည်နေတဲ့ အသံကို တအံ့တသြနဲ့ နားထောင်ရင်း အီးမေးလ် ဆိုတာနဲ့ စတင်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက မြန်မာတယ်လီပို့ ဆိုတာဝေးလို့ ပုဂံလည်း မရှိသေးဘူး၊ ဇလုံလည်း မရှိသေးဘူး။ ဂျီတောက်တို့ ရာဟု မစိန်ကြာတို့ဆို ခေတ်ပေါ် သိပ္ပံကားတွေမှာတောင် မရှိသေးဘူး။ ရန်ကုန်မှာ လင်းယုန်လို့ အမည်ရတဲ့ အီးမေးလ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒါကလည်း “နလမ” နဲ့ခွင့်ပြုထားတာဆိုပဲ။ အင်တာနက်က လုံးဝမရသေး။ အီးမေးလ်မှ အီးမေးလ် စစ်စစ်ပဲရတာ။ ဒိုင်လ်အပ် နဲ့ပေါ့။ ရုံးတစ်ရုံးလုံးမှာမှ အီးမေးလ် အကောင့်က တစ်ခုတည်းရယ်။ အဲဒီတော့ ဘော့စ်အတွက်ပဲပေါ့။
ကျောင်းလျှောက်ဖို့လို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေကို သုံးချင်ရင် Summit Park View လို ဟိုတယ်ကြီးတွေကိုသွားပြီး အီးမေးလ် တစ်စောင် ဖက်အီးစီ ၁ ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ ပို့ရ၊ လက်ခံရလေတယ်။ အ၀င်အီးမေးလ်ကို သူတို့က ပရင့်ထုတ်ထားပြီး စာရေးသူဆီကို ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားပေးတယ်။ လျှို့ဝှက်မှုဆိုတာ ဂျိုနဲ့လားပေါ့။ အဲဒီခေတ်ကြီးက ၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်အထိကြာတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာပဲ သင်တန်းတစ်ခု တက်ဖို့ ပြည်ပထွက်ရင်း ယာဟူး အီးမေးလ် အကောင့်တစ်ခု ရခဲ့ပါတယ်။ တစ်လလောက်သုံးလိုက်ရပြီး ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ ဒုံရင်းဒုံရင်းပဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို Summit မှာ အီးမေးလ် သွားပို့နေရပြန်ရော။
၂၀၀၁ ရောက်တော့ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုမှာ အလုပ်ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး နဲ့ ရုံးသုံး အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခု ကိုယ့်နာမည်နဲ့ရတယ်။ တယ်ဟုတ်ပါလားပေါ့။ အင်တာနက်ကတော့ ရုံးက ကွန်ပျူတာ ဌာနမှာ သွားပြီး သုံးရတယ်။ ပုဂံဆိုက်ဘာတက် လည်းပေါ်လာပြီ။ လူတိုင်းတော့ မရသေးဘူး။
ဦးစမှာ ဘွဲ့လွန်တက်ခွင့်ရတယ်။ ကျောင်းမဖွင့်ခင် တစ်ပတ်လောက် စောရောက်တော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ယောင်နနနဲ့။ ဦးစမှာက အင်တာနက် ကဖေးလည်း ဗန်ကောက်မှာလို ဖောချင်းသောချင်း မဟုတ်တော့ ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ အင်တာနက်ကို တီထွင်တဲ့နိုင်ငံ ဆိုက်ဘာကဖေးတောင် ဗန်ကောက်လို မပေါပါလားလို့ အထင်သေးနေမိသေးတယ်။ နောက်တော့မှာ စာကြည့်တိုက်မှာ အင်တာနက် အလကားသုံးလို့ရမှန်း သိသွားပြီး အရင် ဖွင့်ထားဖူးတဲ့ ယာဟူး အီးမေးလ်ကို ပြန်အသက်သွင်းပြီး အီးမေးလ်ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီ ဆက်သွယ်ရတယ်။ ကျောင်းဖွင့်တာနဲ့ ကျောင်းသားကဒ်နဲ့အတူ ကိုယ်ပိုင် အီးမေးလ် တစ်ခု ရပါတယ်။ ယာဟူးကတော့ သုံးမြဲပေါ့။
ကျောင်းပြီးလို့ မြန်မာပြည်ပြန်တော့ ၂၀၀၁ အနေအထားကို ပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာတော့ ရုံးစားပွဲပေါ်က ကွန်ပျူတာမှာ ပုဂံကပေးတဲ့ အင်တာနက် ရနေပါပြီ။ မေးလ်ဖော်ယူ လည်း ခေတ်စားစပြုလာပြီ။ Summit Park View ကိုရောက်ရင် အီးမေးလ် သွားယူနေကျ သူတို့ရုံးခန်းရှေ့ကနေ ကိုယ်နဲ့ပဲ ဘာမှ မပတ်သက်ခဲ့ဘူးသလို ဖြတ်လျှောက်တတ်နေပြီ။
ဦးစကို နောက်တစ်ခေါက် ရောက်ရပြန်လေတယ်။ အခြေအနေကတော့ သိပ်ပြီး မထူးခြားလှပါ။ အရင်ကရှိတဲ့ ယာဟူး၊ ကျောင်း အီးမေးလ်တွေ ပြန်အသက်သွင်းပြီး သုံးရတာပေါ့။
အဲဒီတုန်းက ဂျီမေးလ်က တစ်ယောက်ယောက် ဖိတ်မှ ဖွင့်လို့ရတာ။ လူတစ်ယောက်ကို သုံးဦးပဲ ဖိတ်ခွင့်ရှိတယ်။ စာရေးသူရဲ့ ဆရာတစ်ယောက်က ဂျီမေးလ်ဖွင့်ဖို့ ဖိတ်စာပို့ပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက် ၂၀၀၅ ခုမှာတော့ ဂျီမေးလ် အကောင့်စပြီးရပါတယ်။
လူတွေမှာ အီးမေးလ် အကောင့် တစ်ခုမက ရှိလာတတ်ပြီး မနက်အိပ်ရာထလို့ ဂျီမေးလ် ချက်ကိုဖွင့်လိုက်ရင် ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက် အွန်လိုင်းမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ (စကားချပ်။ ။ မြန်မာပြည်ကို မတိုးတက်ဖူးလို့ ဘယ်သူပြောမလဲ) စာရေးသူကိုယ်၌လည်း အီးမေးလ် အကောင့် ၆ ခုလောက်နဲ့ ဗျာများနေပါရော။ မဖတ်ဖြစ်တဲ့ အီးမေးလ်တွေက တောင်လိုပုံ။ စာပြန်နောက်ကျတာတွေက မရေနိုင်။
အီးမေးလ်တွေ ရှုပ်ပွနေတော့ မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး ရှုထောင့် ကို စမ်းပြီးသုံးကြည့်တယ်။ မဆိုးဘူး။ အီးမေးလ် အားလုံးကို တစ်နေရာထဲက မြင်ရတယ်။ မဖတ်ရသေးတာတွေ အားလုံးကို ဖတ်ပြီးသား အသွင်ပြောင်းပြီး အခုနောက်ပိုင်း ၀င်သမျှ အီးမေးတွေကို ဖျက်၊ ဖတ်၊ ပြန်၊ သင့်သလို လုပ်လိုက်တော့ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ ယာဟူးနဲ့ကတော့ ခွာပြဲနေပြီ။ သူက ရှုထောင့်နဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်ဘူး။ အင်တာနက် အီးမေးလ်ခေတ်မှာ စောစောပိုင်း ခေတ်ရှေ့ပြေးခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ နောက်ကျကျန်နေခဲ့ပါပြီ။
ဒါပါပဲ။ ဒါပဲ။ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။ ရောက်တတ်ရာရာ ရေးထားတာ။
ဂျီတောက် = G Talk
ရာဟုမစိန်ကြာ = Yahoo Messenger
ရှုထောင့် = Outlook
3 comments Labels: autobio, burmese, email
၃၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉
ခေါင်းစဉ်ပါ ဟိုတယ်ကို ဘယ်လို ဘာသာပြန်ကြမလဲ။ အမြဲတမ်း နားရည်ဝ မျက်စိယဉ် နေတာကတော့ "အင်းလျားလိပ် ဟိုတယ်" လို့ ထင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အင်တာနက် သတင်းတွေထဲမှာ ဖတ်မိတော့ တချို့က "အင်းလျားလိတ် ဟိုတယ်"၊ တချို့က "အင်းယားကန် ဟိုတယ်" ဆိုပြီး ရေးကြတယ်။ "လျား" အစား "ယား" ရေးတာကတော့ ထားပါတော့လေ အသံထွက်ကိုလိုက်ရေးတာလို့ ပြောလို့ရတယ်။ "လိပ်"၊ "လိတ်" နဲ့ "ကန်" ကျတော့ အဓိပ္ပါယ်တွေက ကွဲနေရော။ အင်း ... ကိုယ်ကပဲ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ လိုက်မြင်နေတာလား မသိဘူး။
၂၊ ၁၁၊ ၂၀၀၉
ရှုမျှော်ခင်း မှသည် ခွန်နစ် သို့
ကံဆိုးချင်တော့ ပေါင်တင် ကွန်ပျူတာကပျက်တယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ လုံးဝကြီးပျက်မသွားပဲ ဖိုင်တွေအားလုံးကို ပြန်ယူလို့ရတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ လိုချင်တဲ့ ပေါင်တင် ကွန်ပျူတာအသစ်က ဈေးကြီးနေပြီး ကိုယ်က ဘိုင်ကျနေတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ လပေးနဲ့ အကြွေးရမယ်တဲ့။ ကံဆိုးချင်တော့ ရွေးစရာက များများစားစားမရှိပဲ ကိုယ်သိပ်မသိလှတဲ့ ၆၄ ဘစ် ရှုမျှော်ခင်း ပြူတင်းပေါက် စနစ် ပါတာကြီး ၀ယ်လိုက်ရတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ငွေတပြားမှ လက်ငင်းမပေးရပဲ ကံကောင်းစွာနဲ့ ၁၃ လက်မ ဒဲလ် ပေါင်တင်ကွန်ပျူတာလေး ရလိုက်တယ် ဆိုပါတော့။ ဒီမှာ ဇာတ်လမ်းစတော့တာပဲ။
ကံဆိုးချင်တော့ အရင်သုံးဖူးသမျှ အပျော့ထည် အတော်များများက ၆၄ ဘစ် ရှုမျှော်ခင်းစနစ် နဲ့ သိပ်ပြီး သဟဇာတ မဖြစ်လှဘူး။ ကံကောင်းချင်တော့ ၆၄ ဘစ် ရှုမျှော်ခင်းက သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ တချို့ ၃၂ ဘစ် အပျော့ထည်တွေကို သုံးခွင့်ပေးထားတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ အဲဒီ ၃၂ ဘစ် အပျော့ထည်တွေကိုသုံးရင် ရှုမျှော်ခင်းရဲ့ အင်အားပြည့်သုံးလို့ မရဘူး။ ဂီယာ ၅ ချက်ပါတဲ့ကားမှာ နံပါတ်သုံးဂီယာနဲ့ ဖိနင်းနေသလိုဖြစ်နေတာ။
ကံကောင်းချင်တော့ အပျော့ထည်တွေ အတော်များများက ၆၄ ဘစ် အတွက် ပြင်ဆင်လာကြတာပါဘဲ။ အင်မတန် ကံဆိုးတဲ့ အချက်က မိုက်ခရိုဆော့ရဲ့ ရုံးသုံး အပျော့ထည် ကိုယ်၌က ၃၂ ဘစ်ဖြစ်နေတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ကံကောင်းချင်တော့ ပေါင်တင် ကွန်ပျူတာ ၀ယ်တုန်းက ခွန်နစ်ထွက်ရင် အလကားပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိပါလာတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ခွန်နစ်ထွက်ထွက်ချင်း အင်တာနက်က ဒေါင်းလုပ် ပေးမလုပ်ဘူး။ ကံကောင်းချင်တော့ အိမ်ကို ဒီဗီဒီ ပို့ပေးလာတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ ရှုမျှော်ခင်းကနေ ခွန်နစ်ကို အပြောင်းမှာ အရင်တင်ထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်သတ်သမား မက်ကဖီးက လာနှောင့်နေတယ်။ ခွန်နစ် နဲ့ မက်ကဖီးက မတည့်ကြဘူးလေ။ ခွန်နစ်ကပြောတယ် မက်ကဖီးရှိရင် နင့်ပါတီကို ငါမလာဘူးတဲ့။ လူတွေတင် သင်းခွဲသလား အောင့်မေ့တယ်။ ဘယ်ဟုတ်မလည်း အပျော့ထည်တွေ အချင်းချင်းတောင် သူ့အကန့်လေးနဲ့သူ နေကြတာကလား။ ကံကောင်းချင်တော့ မက်ကဖီးကို ဖြုတ်လို့ရတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ တခြား အပျော့ထည် တော်တော်များများကိုလည်း ယာယီ ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ခွန်နစ်က သူနောက်တော့ ပြန်တင်ပေးပါမယ် ဆိုပဲ။
ကံဆိုးချင်တော့ ၂ နာရီလောက် ကြာမယ် ပြောထားတဲ့ အဆင့်မြှင့်ကိစ္စဟာ ၄ နာရီခွဲ တိတိကြာသွားပါတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ယာယီဖြုတ်ထားတဲ့ အပျော့ထည်တွေ အကုန် ပြန်တက်လာပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ ရှုထောင့် ထဲမှာ မက်ကဖီးရဲ့ ခြေရာလက်ရာတွေကျန်နေပြီး သူ့ကိုဖွင့်တိုင်း အယ်ရာတက်နေပါလေရော။ ကံကောင်းတာလေး တစ်ခုက ရှုမျှော်ခင်းမှာတုန်းက တင်ထားတဲ့ ဇော်ဂျီ ၂၀၀၇ ဖောင့်နဲ့ လက်ကွက်က ခွန်နစ်မှာ အေးဆေး အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော အားလုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်ရင် မုဒုံစောင်က အကောင်းဆုံး ... အဲလေ ... ကံကောင်းပါတယ်လေ။ ခွန်နစ်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ အတော့်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနိုင်ပြီး အဆင်အပြင်လေးကလည်း ရိုးရှင်းတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်စားပွဲ အသစ်လေးကတော့ အောက်မှာပါ။
အပျော့ထည် - software
၆၄ ဘစ် ရှုမျှော်ခင်း ပြူတင်းပေါက် စနစ် - 64-bit Windows Vista
ပေါင်တင်ကွန်ပျူတာ - Laptop
ခွန်နစ် - Windows 7
မိုက်ခရိုဆော့ ရုံးသုံး အပျော့ထည် - Microsoft Office
ရှုထောင့် - Microsoft Outlook
အယ်ရာ - error
9 comments Labels: burmese, computer, news, zawgyi-one
MBEAN is now LEAD
၁၆၊ ၇၊ ၂၀၀၉
နာဂစ်အလွန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားလာသော လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့များထဲက တစ်ခုဖြစ်သည့် Myanmar/Burma Emergency Aid Network (MBEAN) သည် အမည်သစ်ဖြစ်သော Link Emergency Aid & Development (LEAD) ကို ပြောင်းလဲ သုံးစွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၀က်ဆိုဒ်လိပ်စာ အသစ် - http://www.lead-ngo.org
2 comments Labels: burmese, nargis, news, ngo
Blog-vacation is over
Finally my blog-vacation is over.
7 comments Labels: burmese, economy, poverty
1 comments Labels: burmese, education, OCW, self-learning
၁၀၊ ၃၊ ၂၀၀၉
ကျွန်ုပ်လျှောက်ခဲ့သော ပြည်သူ့ကျန်းမာ ခရီးလမ်း
နိဒါန်းရဲ့ အစ (၁)
နိဂုံးရဲ့အစ ကို ရေးပြီးနောက် ကျွန်ုပ်လျှောက်ခဲ့သော ပြည်သူ့ကျန်းမာ ခရီးလမ်း နိဒါန်းပိုင်းရဲ့ အစကို ရေးဖို့ စိတ်ကူးရလာပါတယ်။ ကြားထဲက အချိန်ကွက်လပ်တွေကိုတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြည့်သွားပါမယ်။
ကျွန်ုပ် ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ဘယ်လို ချဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုး ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တန်း ဆေးကျောင်းတက်ရတဲ့ အခါမှာတော့ သိပ်မပျော်ပေ။ ကိုင်ပေါက်လျှင် သေနိုင်လောက်သည့် စာအုပ် အထူကြီးများ၊ မိတ္တူကိုပင် မိတ္တူ ပြန်ကူးထားရသည့် မှုန်ဝါးဝါး ရုပ်ပုံစာအုပ်များ၊ ရိုမန်နှင့် ဂရိ နတ်ဘုရားများရဲ့ အမည်များ နှင့် သူတို့ရဲ့ အံ့မခန်း တန်ခိုး ဣဒ္ဓိပါဒ်များ၊ ဆေးဝါး သမိုင်း မှတ်တမ်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏ မှတ်သားရ ခက်သော အနောက်တိုင်း အမည်များ၊ တစ်ခါမှ မစားဖူး မမြင်ဖူးသော အစားအသောက်များ၏ အနံ့ အရသာများနှင့် နှိုင်းယှဉ် သင်ပြသော ရောဂါ အခြေအနေများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူး (အဲဒီတုန်းက ဆေးကျောင်းမှာ ဒီလို အဏုကြည့်မှန်ဘီလူး တစ်ခုမှမရှိ) ဖြင့် ကြည့်မှ မြင်နိုင်သော အကောင်ပလောင်များ၊ ဇာစ်မြစ် မသိသော ရောဂါများ နှင့် အဖြေ မရေရာ လှသော ကုထုံးများကြားမှာ စာရေးသူတစ်ယောက် ဂျင်ခြေလည်နေသည်။ ဘယ်လိုမှလည်း စိတ်ဝင်စားကြည့်လို့မရ။ စာထဲတွင် စိတ်မ၀င်စားလှသဖြင့် အမှတ်တွေကလည်း မကောင်း၊ တစ်နှစ်တစ်တန်း မှန်မှန်အောင်ဖို့ကိုပင် အတော်ကြီး ကြိုးစားနေရသည်။
အဲဒါတွေကို ညည်းတွားမိတော့ မိခင်ဖြစ်သူက ဒီလိုနှစ်သိမ့်သည်။ “ဆေးကျောင်းတော့ ပြီးအောင်တက်ပါ၊ ပြီးရင် ကြိုက်ရာလုပ်ပါ” တဲ့။ ပြီးတော့ “ဆေးကျောင်းမှာ သင်ရတဲ့ ပညာတွေက တခြား ကဏ္ဍတွေမှာလည်း အသုံးတည့်ပါတယ်” လို့ ဆိုတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရုံမှတစ်ပါး အခြားရွေးစရာလမ်းလည်း မမြင်ခဲ့လေတော့ အရှိန်နဲ့ ဆက်လှိမ့်လို့ နေရပါတယ်။
၁၉၉၃ နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်း(က) ရောက်တဲ့ အခါမှာ စိတ်မ၀င်စားဆုံး ဘာသာများထဲက စိတ်အ၀င်စားဆုံး ဘာသာရပ် နှစ်ခုက မိတ်ဆက်လာပါတယ်။ ဥပဒေရေးရာဆေးပညာ (Forensic Medicine) နဲ့ ကာကွယ်ရေးနှင့်လူမှုရေးဆေးပညာ (အတိုကောက်။ ။ ကာကွယ်လူမှုဘာသာရပ်) (Preventive and Social Medicine) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်လူမှုဘာသာရပ် ကို တခြား တက္ကသိုလ်တွေမှာ ပြည်သူ့ကျန်းမာ ဘာသာရပ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာ ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း မိခင်ကို ပြောမိတော့ သူလည်း ငယ်ငယ်က စိတ်ဝင်စားခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အစိုးရ အလုပ်တွေ အပြင် အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များ (Doctors without borders) လို့ အမည်ရတဲ့ အန်ဂျီအိုအဖွဲ့တွေ ရှိကြောင်း၊ သူ့မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာနွယ်နွယ်အေး ဆိုရင် မြန်မာပြည်က နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များ အဖွဲ့မှာ အလုပ်လုပ်နေကြောင်း၊ အဆင်သင့်လျှင် မိတ်ဆက်ပေးပါမည့် အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။
“နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များ” ဆိုတဲ့ အမည်က ကျွန်ုပ်ရင်ကို ကိုင်လှုပ်သွားပါတယ် လို့ ပြောရင် လွန်မယ် မထင်ပါ။ ခေါင်းထဲတွင် ဘတ်သီးများလင်းပြီး အမှန်အကန်ပင် စိတ်ဝင်စားသွားလေသည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊ နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များ နှင့် ဒေါက်တာနွယ်နွယ်အေး ဆိုသည့် စကားစုများ (key words) အတွေးထဲက တော်တော်နှင့် မထွက်တော့။ ဆေးကျောင်းပြီးလို့ ဘွဲ့ရရင် တကမ္ဘာလုံးလှည့်ပြီး ဆေးကုရတဲ့ အလုပ် လုပ်ရရင် .. ဆိုပြီး စိတ်ကူးများယဉ်လို့ နေပြန်သည်။ ကာကွယ်လူမှု အတန်းကိုလည်း (အခြားသူငယ်ချင်းများ ပျော်ပျော်ကြီး လစ်နေချိန်မှာ) အချိန်မှန် တက်ဖြစ်သည်။ စာကိုလည်း စိတ်ဝင်တစားဖတ်ပြီး အိမ်စာများကိုလည်း ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်သည်။
ဆေးကျောင်းရှိ ကာကွယ်လူမှု ဘာသာရပ်မှာက အတန်းတွင်း စာသင်ရခြင်းအပြင် ကွင်းဆင်းလေ့လာရသည့် ကဏ္ဍလည်း ပါဝင်သည်။ ကျောင်းသားများကို အဖွဲ့ငယ်များဖွဲ့ပေးကာ မြို့နယ်၊ တိုက်နယ် နှင့် ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်ကို လေ့လာစေခြင်းပင်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂၅၀ ကျော်ရှိသဖြင့် ၇ယောက် ၈ယောက်ခန့်ပါသော အဖွဲ့ငယ်များဖွဲ့ကာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်များကို သွားရောက်ရသည်။ ထိုသို့ အဖွဲ့ ဖွဲ့ရာတွင် ဆရာများက ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး မျှမျှတတ ပါဝင်ရန်မှတစ်ပါး ဘာမှ မစွက်ဖက်သဖြင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ စိတ်တိုင်းကျ စုစည်းခွင့်ရကြလေသည်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်ကို သွားရောက် လေ့လာရန်ဆိုသည့် မူလရည်ရွယ်ချက်ကို ဘယ်လောက် စိတ်ဝင်စားကြသလဲ ဆိုတာကို ပြောရခက်ပေမယ့် မိဘအုပ်ထိမ်းသူများနှင့် ဝေးရာ လွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ သူငယ်ချင်းများနှင့် သွားရမည့်အတွက် ပျော်ရွှင် တက်ကြွနေကြသည်ကတော့ သိသာလှသည်။ ဒီကြားထဲ အဖွဲ့ငယ် ဖွဲ့စည်းရေးတွင် လျှို့ဝှက် ရည်ရွယ်ချက် (hidden agenda) နှင့် လှုပ်ရှားကြသူများကလည်း ရှိတတ်ကြသေးသည်။ ဟိုဘက် ဒီဘက် လွန်ဆွဲကြသည်များကလည်း မရှားလှ။ ရေးရင်တော့ ဒီအကြောင်းကပင် စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်တော့မည်။ ထားတော့။
အချိန် ၄ ပတ်ခန့် ကွင်းဆင်း လေ့လာနေရင်း သုတေသန အချက်အလက်များပါ တစ်ပါတည်းကောက်ယူရမည်။ သုတေသန ခေါင်းစဉ်က “သက်ကြီးရွယ်အိုကျန်းမာရေး”။ အသက် ၆၀ ကျော် အဖိုးအဖွားများ မည်သို့ နေထိုင်စားသောက်နေကြသည်၊ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ မည်သို့ရှိသည် စသည်တို့ကို မေးမြန်း၊ စမ်းသပ်ကာ မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ ကိုယ့်သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ငယ်အလိုက် တာဝန်ကျရာ မြို့နယ်တွင် လူတွေ့မေးမြန်းပြီး ရလာသည်များကို စုပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ ကျန်းမာရေးကတော့ဖြင့် မည်သို့ အခြေအနေ ရှိနေပါသည် ဟု အဖြေထုတ် ကောက်ချက်ချရန်ဖြစ်သည်။
သုတေသန ပြုရန် လိုအပ်ချက်များကို အတန်းထဲတွင် စာတွေ့သင်ပြီး ကွင်းဆင်းလျှင်တော့ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေစာရင်း ပြုစုပုံ၊ ကျပန်းစနစ်ဖြင့် လူတွေ့မေးမြန်းမည့်အိမ် ရွေးချယ်ပုံ၊ ပါဝင်သင့်သည့်မေးခွန်းများ၊ မေးပုံမေးနည်း၊ တိုင်းတာရေး ကိရိယာများ (ပေါင်ချိန်စက်၊ သွေးပေါင်ချိန်စက် စသည်များ) တိကျမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း စသည်တို့ကတော့ မရှိမဖြစ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရသည့် အချက်များပင်။
ထိုသို့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးချိန်များတွင် မရှင်းလင်းသည့် အချက်များကို စာရေးသူက ဆရာ့အား ပြန်လှန်မေးခွန်းများ မေးလေ့ရှိသည်။ ဆွေးနွေးချိန် မြန်မြန်ပြီးပြတ်ပြီး အိမ်ပြန်လိုကြသော သူငယ်ချင်းအချို့ကမူ “ဒီကောင် .. လျှာရှည်လိုက်တာ၊ ဟိုရောက်ရင် အဆင်ပြေသလို လုပ်လိုက် ပြီးတာပဲ ဆရာတွေလည်း သိမှာမှ မဟုတ်တာ” ဟု စိတ်ထဲက ကျိန်ဆဲနေကြသည်။ ရံဖန်ရံခါ နှုတ်မှပင် ထုတ်ဖော်ကာ ထောမနာ ပြုတတ်ကြသည်။ အချင်းချင်း မျက်စပစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်ကတော့ စိတ်ဝင်စားသည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာ ဘာသာရပ်ကို လက်တွေ့ဆင်းရာတွင် တတ်နိုင်သရွေ့ တိကျချင်သည်၊ လုပ်တတ်ချင်သည်။ သို့သော် ထိုစိတ်ဓါတ်ကား ထိုအချိန်က ဆေးကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သိပ်ပြီး သဟဇာတ မဖြစ်လှ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာဘာသာရပ် ဆိုသည်မှာ ဆေးပညာ၊ ခွဲစိတ်၊ သားဖွားမီးယပ်၊ ကလေး စသည့် အထူးကု ဆရာဝန် အလုပ် မလုပ်ဖြစ်တော့မှ နောက်ဆုံး (မတတ်သာ၍) ရွေးချယ်ရသည့် (ရွေးချယ်ကြသည့်) လမ်းဟု ထင်မှတ်မှားကာ ဆေးကျောင်းသား အများစု၏ အထင်သေးခြင်းကို ခံနေရသော အချိန်ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပြောပြော ဘယ်လိုနှာခေါင်းရှုံ့ရှုံ့ စာရေးသူကတော့ ခေါင်းခပ်မာမာဖြင့် ဇွတ်ပေကာ မေးခွန်းများမေးဆဲ လုပ်ရမည့် ကိစ္စများကို တိတိကျကျ လုပ်ဆဲပင်။ ရလာဒ်ကတော့ နာမည်သစ် “မောင်ရစ်”။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ် ဒီလို တပေါင်းလပြည့် အချိန်မျိုးမှာပဲ လက်တွေ့ ကွင်းဆင်းရမည့် အချိန် ရောက်လို့လာသည်။ သွားရမည့်နေရာက ပဲခူးတိုင်း၊ ပေါင်းတည်မြို့နယ်။ အဖွဲ့ဝင်က စုစုပေါင်း ၇ ဦး။
2 comments Labels: autobio, burmese, med-school-life, public health
1 comments Labels: burmese, general
This is the name ofatype of coffee available at my school's cafeteria. It may have been given after red eye flights - flights that leave or arrive after mid-night or very early in the morning. One part espresso and one part coffee. It is great to kick start onaMonday morning.
$2 forashort cup.
2 comments Labels: english, general
This is the video that touched me at the very core of my heart.
5 comments Labels: motivation, video
Last year this time, I was planning to go and collect primary data in Bangladesh. Then, unexpected things happened. Nargis was one of them. My plan was washed away likeabamboo hut smashed byahuge storm surge.
Then, I recollected my strength and change the course which is not entirely different from the previous one. But, this one would give meachance to complete the current study program withinarealistic timeframe.
I will be working onagreat research project called JiVitA - which means "life" in Bangali. Today, I received permission to start working on it.
This is it. Beginning of the end of my doctoral study.
14 comments Labels: autobio, public health
Mt. Saramati Trip
၂၃၊ ၂၊ ၂၀၀၉
တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်း၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် စာရာမေတိ ခရီး
အမြင့်ပေ ၁၂၅၅၃ ပေ (၃၈၂၅ မီတာ) ရှိ စာရာမေတိတောင်ထိပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ကိုင်းတိုင်း နှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ နာဂပြည်နယ် တို့၏ နယ်ခြား၊ မြန်မာ ပိုင်နက်အတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီးလှအောင် (မြန်မာနိုင်ငံ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်း တည်ထောင်သူ၊ ပထမ ဥက္ကဋ္ဌ) ပါဝင်သော အဖွဲ့က ထိုတောင်ထိပ်တွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်ခြားမှတ်တိုင် ကို စိုက်ထူခဲ့သည်။ ထိုနောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာသည်အထိ မြန်မာပြည်မှ မည်သူမျှ ထပ်မံတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပဲ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ရက်တွင်မှ ဒေါက်တာပိုင်စိုး ဦးဆောင်သော မြန်မာနိုင်ငံ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်းက အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့လေသည်။
ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ရက်တွင် ဆရာဦးမျိုးသန့် ဦးဆောင်သော တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်တောင်တက် အသင်းကလည်း စာရာမေတိတောင်ထိပ်ကို အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသဖြင့် မိတ်ဆွေများ ဗဟုသုတဖြစ်စေရန် သတင်းစာ ဖြတ်ပိုင်းနှင့်တကွ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများကို တင်လိုက်ရပေသည်။
သတင်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှ ဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပုံများမှာ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်းဝင် ကိုအောင်မျိုး၏ ဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါသည်။
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ - မောင်မောင်မြင့်ဆွေ
တောင်တက်ခြင်းကား ကျန်းမာခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်ခြင်းတို့ကို အထောက်အကူ ပြုသည့်အပြင် စိတ်ပိုင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာသန်စွမ်းခြင်းကို ကြီးမားစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် တောင်တက်ခြင်းသည် ယနေ့ခေတ် လူမှုဘ၀၌ ခေတ်စားလာသည်။
မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းက တက္ကသိုလ်များခြေလျင်နှင့် တောင်တက်အသင်းက စာရာမေတိတောင်ထိပ်သို့ အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်ဟူသော သတင်းကြောင့် တောင်တက်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသူများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာ “စစ်ကိုင်းတိုင်း ခန္တီးခရိုင် လေရှီးမြှိုနယ် အနောက်ဘက် တောင်တန်းဒေသ အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်နိမိတ်မျဉ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ စာရာမေတိတောင် (နွယ်မောက်တောင်) ကို တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ စာရာမေတိတောင်ဟာ အမြင့်ပေ ၁၂၅၅၃ ပေရှိပြီး ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ တောင်တက်ခရီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု တောင်တက်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာန တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဦးမျိုးသန့်က မြန်မာ့အလင်းသို့ ရှင်းပြသည်။
တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်နှင့်တောင်တက်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ဦးမျိုးသန့် ခေါင်းဆောင်သော တောင်တက်အဖွဲ့တွင် စုစုပေါင်း ၂၂ ဦး ပါဝင်ပြီး အမျိုးသား ၁၅ ဦး အမျိုးသမီး ခုနစ်ဦးတို့ ပါဝင်ကြသည်။
“တောင်တက်အဖွဲ့မှာပါတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ ပဲခူး ဒီဂရီကောလိပ်၊ ထားဝယ် တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်၊ သူနာပြု တက္ကသိုလ်နဲ့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တို့က တောင်တက်အဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ စာရာမေတိတောင်ထိပ်ကို မတက်ရောက်ဖူးရင် တောင်တက်သမား အစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာနိုင်ငံခြေလျင်တောင်တက်အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတစ်ဦးက ပြောသလို အမှန်ပင် တက်ရောက်ရခက်ခဲတဲ့ တောင်ထိပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးမျိုးသန့်က ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်းကို စတင်တည်ထောင် ခဲ့သည့် ၁၉၅၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အထိ စာရာမေတိတောင်ထိပ်သို့ ယခုအဖွဲ့အပါအ၀င် ခြောက်ဖွဲ့သာ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုတောင်တက် ခရီးစဉ်သည် တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်း၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အတွက် ပထမဆုံးခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် တောင်တက်အဖွဲ့ အုပ်ချုပ်သူအဖြစ် လိုက်ပါသွားသူ ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ် ပထ၀ီဝင်ဌာန ကထိက ဒေါ်နီနီအေးက “၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်မှာ ရန်ကုန်မြို့က မန္တလေးမြို့ကို ရထားနဲ့ စထွက်တယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်မှာ မန္တလေးကနေပြီး ကားနဲ့ မုံရွာ၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်မှာ မုံရွာကနေပြီး ဟုမ္မလင်းမြို့ကို ရေယာဉ်နဲ့ သွားတယ်။ ရေယာဉ်ခရီးနဲ့ ဇန်န၀ါရီ ၁၆ ရက်အထိ ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး ထမံသီရွာကိုရောက်တယ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၁၇ရက်မှာ ထမံသီရွာကနေပြီး လေရှီးမြို့ကိုကားနဲ့ ဆက်ထွက်တယ်။ အဲဒီလေရှီးမြို့နေပြီး တောင်တက်ခရီး စတင်တော့တာပါပဲ” ဟု မြန်မာ့အလင်းသို့ ရှင်းပြသည်။
တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်နှင့်တောင်တက်အသင်းမှ အဖွဲ့ဝင်များသည် ဇန်န၀ါရီ ၁၈ရက်၌ လေရှီးမြို့မှ ပိန္နဲကုန်းရွာသို့ တောင်တက်ခရီးစဉ်အတိုင်း ဖြည်းဖြည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြရာ ခရီး ငါးမိုင်ခန့်သာ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရပ်နားခဲ့ရသည်။ ပိန္နဲကုန်းရွာသည် အမြင့်ပေ ၃၀၇၀ ၌ တည်ရှိသော ရွာဖြစ်သည်။
“ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ရက်မှာ ပိန္နဲကုန်းရွာကနေပြီး ကျဲ့ကော့ရွာကို ခရီးဆက်တဲ့အခါ ၈၀ ဒီဂရီလောက် မတ်စောက်နေတဲ့ တောင်တွေကို ကျော်ဖြတ်ရတယ်။ တောင်တစ်လုံးကျော်လိုက်၊ တောင်အောက်ခြေဆင်းလိုက်၊ နောက်တစ်တောင်ပေါ် တက်လိုက်နဲ့ ခရီးဆက်ခဲ့ရတယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်မှာ ကျဲ့ကောရွာကနေပြီး ရော်ပါးမီရွာကို တောင်တက်ခရီးတက်တဲ့အခါ လမ်းမှာ နန်းဓလိမ်ချောင်းကို ဖြတ်ပြီး သွယ်တန်းထားတဲ့ ကြိမ်ကြိုးတံတားကို ဖြတ်သန်းရတာ အန္တရာယ်အလွန်များလို့ သတိထားပြီး ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတယ်။ ဒီကြိုးတံတားက ပေ ၂၀၀ ကျော် ရှည်တယ်။ ရောပါးမီရွာဟာ အမြင့်ပေ ၃၂၆၀ မှာ တည်ရှိပါတယ်” ဟု ဒေါ်နီနီအေးက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
ထို့နောက် ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရော်ပါးမီရွာမှ လတ္တဲရွာသို့ အတက်ခရီးစဉ်၌ ၉၀ ဒီဂရီ မတ်စောက်နေသော တောင်များ၊ တောင်ထွတ်များကို ခက်ခဲစွာ ဖြတ်သန်းပြီးမှ လတ္တဲရွာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ လတ္တဲရွာသည် အိမ်ခြေရှစ်လုံးသာရှိပြီး အမြင့်ပေ ၄၈၁၀ ခန့်၌ တည်ရှိသော တောင်ပေါ်ရွာဖြစ်သည်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်တွင် လတ္တဲရွာမှ နံနက်ပိုင်း ထွက်ခဲ့ကြရာ အလွန်မတ်စောက်သော တောင်တန်းများကြောင့် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲ၌ ခဗာကဇူချောင်း တောစခန်းသို့ ရောက်ရှိစခန်းချခဲ့ကြသည်။
“အဲဒီ လတ္တဲရွာက မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ဘက် အစွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ လူနေရွာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခဗာကဇူချောင်း တောစခန်းမှာ ယာယီတဲထိုးပြီး စခန်းချရတယ်။ ၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ပဲရှိလို့ အအေးပိုပါတယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်မှာ ခဗာကဇူချောင်း စခန်းကနေပြီး တီရှီချောင်း စခန်းအထိ တောင်တက်တောင်ဆင်း ခရီးကြမ်းတွေ တက်ခဲ့တာ တစ်နေကုန်တာတောင် ၁၄ မိုင် ခရီးပဲ ရောက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အမြင့်ပေ ၇၆၇၅ ပေ အထိ ရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်ပိုင်းမှာတော့ ရွက်ကြွေတောတွေ တွေ့ရတယ်” ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ရှင်းပြသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်၌ တီရှီတီချောင်း စခန်းမှ ကသာဗောင်သီချောင်း စခန်းသို့ ဆက်လက် တက်ရောက်ခဲ့ရာ မြင့်မား မတ်စောက်သော တောင်တန်းများကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသဖြင့် တစ်နေကုန် ခရီးစဉ်တွင် ခုနစ်မိုင်ခန့်သာ ခရီးပေါက်ခဲ့သည်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက်၌ ကသာဗောင်သီချောင်း စခန်းမှ အမြင့်ပေ ၁၀၈၀၀ ရှိသော ရေခဲစပ် စခန်းသို့ ဆက်လက် တက်ရောက်ခဲ့ရာ ရေခဲတုံးများကို စတင်တွေ့ရှိရသည်။ သောက်သုံးရေအတွက် ရေခဲများကို ထုခွဲကာ သောက်ရေအတွက် ဖြေရှင်းခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ “ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ရက်မှာ ရေခဲစပ် စခန်းကနေပြီး ဆက်လက် တက်ရောက်တဲ့အခါ အမြင့်ပေ ၁၂၅၅၂ ပေ ရှိတဲ့ စာရာမေတိတောင်ထိပ်ကို နံနက် ၉ နာရီခွဲမှာ အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ တောင်ထိပ်ခရီးစဉ်မှာတော့ တောင်ဆိတ်၊ ၀က်ဝံ စတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားမှု ခြေရာတွေ တွေ့ရတယ်။ စာရာမေတိတောင်ထိပ်မှာ နိုင်ငံတော်အလံနဲ့ တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်တောင်တက်အသင်း အလံတွေကို စိုက်ထူပြီး နိုင်ငံတော်သီချင်းကို သံပြိုင်သီဆိုခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနောက် မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတယ်။ တောင်ထိပ်ပေါ်မှာ တစ်နာရီ မိုင် ၆၀ နှုန်းလောက် လေပြင်းတွေ တိုက်နေတဲ့အပြင် ရာသီဥတုအခြေအနေ မကောင်းတာနဲ့ ပြန်ဆင်းခဲ့ရတယ်” ဟု ဒေါ်နီနီအေးက မြန်မာ့အလင်းသို့ ရှင်းပြသည်။
အပြန်ခရီးစဉ်၌ တီရှီတီချောင်း၊ လတ္တဲရွာ၊ ကျဲ့ကော့ရွာ၊ ပိန္နဲကုန်းရွာ နှင့် လေရှီးမြို့သို့ ငါးရက် ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး လေရှီးမြို့မှ ထမံသီရွာ၊ ဟုမ္မလင်း၊ မော်လိုက်၊ ကနီ၊ မုံရွာမြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များသို့ ကား၊ ရေယာဉ်များဖြင့် ပြန်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်မြို့သို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်၌ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ စာရာမေတိ တောင်တက် အသွားအပြန်ခရီးစဉ်သည် စုစုပေါင်း ၂၅ ရက် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး တောင်တက်အသွားအပြန် ခရီးမိုင်ပေါင်း ၁၅၀ ခန့်နှင့် မြင့်မား မတ်စောက်သော တောင်အလုံးရေ ၃၀ ကျော်ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသဖြင့် ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းသော တောင်တက်ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါကြောင်း တွေ့ဆုံမေးမြန်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။
စာရာမေတိ ကို မြန်မာမြေပုံတွင် Saramayti ဟု စာလုံးပေါင်းသော်လည်း Britannica စွယ်စုံကျမ်းတွင်မူ စာရာမာတိ Saramati ဟု စာလုံးပေါင်းကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အင်တာနက်တွင် ရှာဖွေရင်း ယူကျု၌ စာရာမာတိ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် အောက်တွင် တစ်ပါတည်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
1 comments Labels: burma, burmese, hiking, myanmar, news, photo, saramati, travel, video